Iiraan & Italy: Heshiis maalgashi dhaqaale oo gaaraya 5 Bilyan oo Euro – Kasmo Newspaper
Iiraan & Italy: Heshiis maalgashi dhaqaale oo gaaraya 5 Bilyan oo Euro
Updated - January 10, 2018 5:01 pm GMT
London (Kasmo), Dalalka Talyaaniga iyo Iiraan ayaa malinta Kamiista ah, 11ka Jenaayo 2018, kala saxiian doona heshiis dhaqaale iyo ganacsi oo ay ku baxayso lacag gaaraysa 5 Bilyan oo Euro ($6 Bilyan oo Dollar).
Sida ay shaaca ka qaadday Wasaaradda Maaliyadda Talyaaniga, Xukuumadda Rome waxay dhiirri galin doontaa Shirkadaha Talyaaniga ee danaynaya in ay maalgashi ku sameeyaan dalka Iiraan.
Heshiiska waxaa dhinaca Talyaaniga u saxiixaya Hay’adda Qaranka ee maalgashiga iyo horumarinta warshadaha (Invitalia) oo khadad amaah ah u furi doonta 2 Bangi oo Iiraan ah, Bank of Industry and Mines iyo Middle East Bank.
Talyaanigu wuxuu ahaa dalkii Yurub la sameeyay ganacsigii ugu ballaarnaa, muddadii u dhexaysay Jenaayo-September 2017 oo ay ku baxday lacag gaaraysa 3,45 Bilyan oo Euro. Wuxuu sidoo kale yahay dalka ugu horreeya Yurub oo ay soo gaarto waxa laga soo dhoofiyo Iiraan, oo 9kii bilood ee u horreeyay 2017kii ka soo dhoofsaday badeeco qayriin oo qiimaheedu gaarayo 2,2 Bilyan oo Euro.
Xiriirka Dhaqaale iyo Ganacsi ee Iiran iyo Midowga Yurub wuxuu sii xoogaystay intii ka dambaysay saxiixa Heshiiskii Nuklearka JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) ee 14kii July 2015.
Heshiiskaas oo dhexmaray Iiran iyo xubnaha kooxda 5+1 oo loola jeedo Maraykanka,Russiya, Britain,Fransa iyo Jarmalka, taas oo darted, Midowga Yurub, 16kii Oktobar 2017, taageeray, isaga oo ka hor yimid go’aankii Trump ee 13kii September uga codsaday Congress-ka Maraykanka in dib loogu noqodo heshiiskaas.
Ujeeddada Madaxweynaha Maraykanku waxay ahayd sidii looga hortagi lahaa barnaamijka gantaalaha Iiraan,mar haddii heshiika aanu ka mamnuucayn Iiraan in ay sii waddo tijaabooyinkeeda gantaalada.